Dinner Mate – Gold Channel Movies
May. 25, 2020 MBC
1Season 1 May. 25, 2020
Episode 1 May. 25, 2020
Episode2May. 26, 2020
Episode3Jun. 01, 2020
Episode4Jun. 02, 2020
Episode5Jun. 09, 2020
Episode6Jun. 09, 2020
Episode7Jun. 14, 2020
Episode 8 Jun. 16, 2020
Episode9Jun. 23, 2020
Episode 10 Jun. 23, 2020
Episode 11 Jun. 29, 2020
Episode 12 Jun. 30, 2020
Crush Landing on You ဇာတ်ကားထဲက ​ဆောဒန်နဲ့ မင်းသား ဂျွန်စောတို့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မယ့် Romance Drama အသစ်က အစားအသောက် စားပုံစားနည်းတွေက တဆင့် ကုသပေးတတ်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အသည်းခဏ ခဏကွဲခဲ့ရတဲ့ PD တို့ကြားက ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
Webtoon ကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Kim Hae Kyung (Song Seung Heon) က စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စားသောက်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး ထူးခြားတဲ့လေ့လာမှုတွေနဲ့ သူ့ရဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးတတ်တဲ့သူပေါ့။ Hae Kyung က နူးညံ့ပြီး စိတ်သဘောကောင်းပြီး လူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ အရမ်းစေ့စပ်ပြီး ဂရုစိုက်သူတစ်ယောက်ပါ။
မင်းသမီး Woo Do Hee (Seo Ji Hye) ကတော့ 2N BOX ဆိုတဲ့ Web Channel တစ်ခုက PD တစ်ယောက်ပါ ။ Do Hee က ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး တက်ကြွတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အချစ်ရေးမှာတော့ အသည်း ၂ ခါ ကွဲထားသူပေါ့။
စားသောက်ဆိုင်မှာ စားရတာလည်း ကြိုက်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းလည်း မစားချင်တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ တွေ့ဆုံမလဲ။ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် မသိကြသေးသူနှစ်ဦးသား အမြဲ ညစာအတူစားဖြစ်ကြရင်း ဘယ်လို Falling in Love ဖြစ်မလဲ။ စားသောက်ဆိုင်ကနေ စတင်ပြီး စားသောက်ရင်းနဲ့ပဲ ရန်တွေပဲဖြစ်ကျမလား။ တစ်ယောက်ဒဏ်ရာ တစ်ယောက်ကပဲ ကုသပေးကျမလား ဆိုတာကိုတော့
MBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ ​မေလ ၂၅ ရက်​နေ့မှာ တနင်္လာ အင်္ဂါ​နေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Translated by Hnin Aye Nyein
Original title 저녁 같이 드실래요?
First air date May. 25, 2020
Sci-Fi & Fantasy 36
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020)
Swamp Thing (2019) ျမန္မာစာတန္းထုိး
Meteor Garden (2018) ျမန္မာစာတမ္းထိုး